Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Isweydaarsigu wuxuu hadda ku jiraa Xaaladda Soo-kabashada
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan "Isweydaarsiga hadda wuxuu ku jiraa Xaaladda Soo Kabashada" Fariinta
Habka Soo Celinta Beddelka:
Microsoft Outlook 2003 iyo noocyo cusub ayaa soo bandhigaya muuqaal cusub oo loo yaqaan Kaydka Habka Isdhaafsiga, taas oo runtii ah nooc ka mid ah faylalka qad la'aanta ah ee ku habboon qaababka duugga ah ee 'Outlook'. Kaydka Habka Isdhaafsiga waxay bixisaa hawlo badan si loo sameeyo is waafajinta iyo hawlgallada khadka tooska ah si hufan oo ku habboon. Mid ka mid ah ayaa ah Habka Dib u Soo Celinta.
Marka serverka isweydaarsiga, keydka macluumaadka, ama sanduuqa boostada ee la socda galka khad la'aanta ah (.ost) faylka dib loo dejiyaa, ama waxaa jira iswaafaq la'aan udhaxeysa sanduuqa boostada iyo OST faylka, markaa haddii aad socotid Muuqaalka 2002 ama noocyadii hore, ama aad ku shaqeyneyso Muuqaalka 2003 iyo noocyo cusub laakiin aad leedahay Kaydka Habka Isdhaafsiga naafada ah, oo aad doorato inaad ku shaqeyso khadka tooska ah, markaa Muuqaalka ayaa abuuri doona cusub OST faylka sanduuqa boostada cusub. Duug OST faylka lama tirtirayo, laakiin maheli kartid xogta ku jirta. Goor dambe marka sanduuqa boostada asalka ah mar labaad la heli karo, waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho xogtii hore OST faylka, laakiin kuwa cusub OST faylka mar kale lama geli karo Haddii aad u baahan tahay inaad ka hesho xogta labadaba OST faylasha, waxaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho astaamaha Muuqaalka Muuqaalka si aad ugu wareejiso kuwa u dhigma OST faylasha, taas oo aad u dhib badan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaaleyso Muuqaalka 2003 iyo noocyada dambe, iyo Kaydka Habka Isdhaafsiga waa la hawlgeliyaa, markaa waxaad arki doontaa farriinta digniinta ah ee soo socota marka sanduuqaaga Exchange aad dib u dajiso ama aan la jaan qaadi karin:
Sarrifka ayaa hadda ku jira qaab soo kabasho. Waxaad kuxirankartaa serverkaaga sarifka adoo adeegsanaya shabakada, kashaqeyn karo qad la'aanta, ama waad joojin kartaa astaanta.
taas oo muujinaysa Muuqaalka iyo Sarrifka ayaa hadda ku jira Habka Dib u Soo Celinta.
Markaad ku jirto Habka Dib u Soo Celinta, waxaad haysataa laba ikhtiyaar:
Habka qadla'aanta. Haddii aad doorato Shaqada shaqeeya, waxaad ka heli kartaa xogta hore OST faylka, laakiin maahan serverka sarrifka. Duug OST faylka wali waa lagu heli karaa qaab qad la'aan.
Habka khadka tooska ah. Haddii aad doorato Connect, waxaad ka heli kartaa serverka sarrifka, laakiin maaha kii hore OST faylka Haddii aad rabto inaad marin u hesho xog duug ah OST faylka, waad ka bixi kartaa Muuqaalka iyo start mar kale Qaabka tooska ah.
Sidaa darteed, adoo dooranaya xulashooyin kala duwan, waxaad marin u heli kartaa kii hore OST faylka ama sanduuqa boostada cusub ee serverka isweydaarsiga si xulasho ah.
In Habka Dib u Soo Celinta, Aad awoodid badalo kii hore OST fayl u gal faylka PST inay u haajiraan xogteeda sanduuqa boostada cusub.
Haddii hadhow sanduuqii hore ee Exchange sanduuqii lala xiriirin jiray kii hore OST faylka ayaa mar labaad la heli karaa, ka dibna xulashada Connect, waad bixi doontaa Habka Dib u Soo Celinta si toos ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii sanduuqa boostada aan loo heli karin si joogto ah, ama uusan waafaqsanayn kii hore OST faylka OST musuqmaasuq fayl garee, ka dib sida loo baxo Habka Dib u Soo Celinta oo aan ka dhigaa inay Muuqaalka si caadi ah mar labaad u shaqeyso? Hoos waxaa ku yaal jawaabta.
Ka bax Habka Dib-u-soo-kabashada Isweydaarsiga oo si caadi ah Marlabaad U Shaqayso:
Haddii sanduuqa isweydaarsiga aan la heli karin weligiis, ama uusan waafaqsanayn kii hore OST faylka faylka musuqmaasuq awgood, markaa fadlan samee sida soo socota si aad uga baxdo Habka Dib u Soo Celinta oo u oggolow Muuqaalka inuu mar kale si caadi ah u shaqeeyo:
Xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsi ah ee marin u heli kara kii hore OST gudbiso.
Soo hel tii hore OST gudbiso. Waxaad isticmaali kartaa Search shaqada ee Windows si aad u raadiso ka OST faylka. Ama ka raadi goobaha cayiman faylka.
Samatabixi xogta qad la'aanta ah ee duugga ah OST gudbiso. Odayga OST Faylka waxaa ku jira xog qadla'aan ah, oo ay kujiraan fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale, sanduuqaagii hore Exchange Exchange, oo muhiim kuu ah adiga. Si loo badbaadiyo xogtan, waa inaad isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loo duugo kii hore OST faylka, soo kabso xogta ku jirta, oo ku keydi faylka Muuqaalka PST si aad si fudud oo hufan uga wada heli karto dhammaan farriimaha iyo waxyaabaha ku jira Muuqaalka.
Kaabta wixii hore OST gudbiso. Amaanka dartiis, waad ka fiicnaan laheyd.
Demi Habka Isdhaafsiga Kaydsan.5.1 Start Muuqaalka.
5.2 On Tools menu, click Xisaabaadka E-mailka, guji Arag ama beddel akoonnada emaylka jira, kadibna guji Next.
5.3 Gudaha Muuqaalka wuxuu ku shaqeeyaa emayl loogu talagalay koontooyinkan sida soo socota Liiska, guji koontada e-maylka Sarrifka Server, ka dibna dhagsii Change.
5.4 Hoos Adeegga Microsoft Exchange, dhagsii si aad u nadiifiso Adeegso Is-beddelka Qarsoon hubi sanduuqa.
5.5 Ka bixida Muuqaalka
Magacaabi ama tirtir wixii hore OST gudbiso.
Daar Habka Isdhaafsiga Kaydsan.7.1 Start Muuqaalka.
7.2 On Tools menu, click Xisaabaadka E-mailka, guji Arag ama beddel akoonnada emaylka jira, kadibna guji Next.
7.3 Gudaha Muuqaalka wuxuu ku shaqeeyaa emayl loogu talagalay koontooyinkan sida soo socota Liiska, guji koontada e-maylka Sarrifka Server, ka dibna dhagsii Change.
7.4 Hoos Adeegga Microsoft Exchange, dhagsii si aad awood ugu yeelatid Adeegso Is-beddelka Qarsoon hubi sanduuqa.
7.5 Ka bixida Muuqaalka
Dib u dhis cusub OST Faylka. Qaraarkatart Muuqaalka oo hubi in dejimaha akoonka sanduuqa boostada cusub ee Muuqaalka ay sax yihiin, oo Muuqaalka ayaa si guul leh ugu xirmi kara server-kaaga Exchange. Kadib u dir / soo dir emaylkaaga emaylka isweydaarsiga ee u dhigma, kaas oo u oggolaan doona Muuqaalka inuu abuuro fayl cusub oo faylka ah si otomaatig ah isla markaana u waafajiyo xogtiisa sanduuqa isweydaarsiga. waa inuu tirtiraa oo uu abuuraa mid cusub, sida soo socota:
8.1 Xidho Microsoft Outlook.
8.2 Guji Start, kadibna guji Control Panel.
8.3 Guji U beddel aragtida caadiga ah haddii aad isticmaaleyso Windows XP ama noocyo ka sareeya.
8.4 Laba-guji Mail.
8.5 Gudaha Dejinta Fariimaha sanduuqa wada-hadalka, guji Muuji Profiles.
8.6 Xullo mid kamida astaanta khaldan ee liiska guji saar si looga saaro.
8.7 Ku celi 8.6 illaa dhammaan astaamaha khaldan laga saaro.
8.8 Guji Add si loo abuuro astaan ​​cusub oo loogu daro xisaabaadka emaylka sida waafaqsan dejintooda ku saabsan serverka Sarrifka.
8.9 Start Muuqaalka iyo dib-u-waafajinta sanduuqaaga Sarrifka, waad bixi doontaa Habka Dib u Soo Celinta.
Soo dejiso xogta lagu soo celiyey tallaabada 3. Kadib markaad baxdo Habka Dib u Soo Celinta, hayso cusub OST faylka loogu talagalay sanduuqa isweydaarsiga ee furan, ka dibna fur faylka PST ee lagu sameeyay tallaabada 3 oo leh Muuqaalka. Sida ay ku jiraan dhammaan xogta soo kabsaday in aad jir OST faylka, waad nuqulan kartaa waxyaabaha loo baahan yahay si aad u cusub OST faylka u baahdo.